China Polyurea Skin EVA Foam Egcwaliswe yiDonut Fender mveliso kunye nabathengisi Haohang
Umthwalo olinganisiweyo wokujika komthamo igophe eliphantsi Imikhosi yokucheba Ukuzilungelelanisa nokutshintsha kwamanqanaba amanzi Iindleko zokufaka eziphantsi Ngokubanzi ulondolozo lwasimahla Iidrafti zomntu ngamnye zinokulawulwa zizinto zokulwa Ukufunxwa kwamandla okuphezulu kuthintela ukonakala kuzo zombini iinqanawa zokulwela kunye nezomileyo kwaye zenza ukuba i-berthing isebenze
Idonut Fender luhlobo oluthile lwe Abaxhasi be-foam. Yenzelwe ukuba ityibilike ngokulula ngaphezulu kokubekwa kwindawo eyodwa. Ngenxa yolwakhiwo lwayo, i-fender iyadada inyuka isihla ngamanqanaba amanzi aguqukayo kwaye ijikeleza xa iinqanawa zigungqa kwaye zityibilika ecaleni kwale fender. IDonut Fender iyilelwe nge-100% yeseli evaliweyo enqamlezileyo ye-polyethylene foam core, isikhumba se-elastomeric esomeleleyo kunye neepads zokungqubana eziphantsi kumbindi wentsimbi yangaphakathi.
Abaxhasi beDonut bafumaneka ngobubanzi ukusuka kwi-1,270 mm ukuya kwi-4,220 mm kunye nobukhulu bepali eyi-610 mm ukuya kwi-2,388 mm. Ukongeza, isithsaba sokubamba, izinto zokulwa (zezicelo zangaphantsi kolwandle) okanye ezinye izinto ezinje ngee-nettings zokukhusela zinokongezwa.
Ubulukhuni be-foam, ubukhulu besikhumba, ububanzi be-fender / fender kunye nobude be-fender bunokutshintshwa xa uceliwe. I-ShibataFenderTeam ingavuya xa ifumana igalelo loyilo olusivumela ukuba senze uhlobo oluchanekileyo, ubungakanani kunye nolwakhiwo ngokubanzi lweDonut Fender.
Ukulingana komthwalo wokuphambuka kwegophe
Imikhosi yokucheba esezantsi
Ukuzilungelelanisa nokutshintsha kwenqanaba lamanzi
Iindleko zokufaka eziphantsi
Ulondolozo ngokubanzi simahla
Uyilo lomntu ngamnye lunokulawulwa zizinto zokulwa
Ukufunxwa kwamandla okuphezulu kuthintela ukonakala kuzo zombini iinqanawa ezisilelayo kunye nezomileyo kwaye zenze imisebenzi ye-berthing ibe lula kwaye ikhuseleke.
Ukufakwa ngokukhawuleza nangokulula
Yenziwe ngezinto ezizinzileyo nezinokuthenjwa ukunciphisa iindleko zolondolozo kunye nokwandisa ukusebenza kunye nobomi be-fender
Ijika elingaphantsi libonisa ukufakwa kwamandla kwi-HAOHANG Donut Fender ethathelwe ingqalelo phantsi kweepesenti ezahlukeneyo zoxinzelelo. Linye kuphela icala leFender elisebenza ngexesha loxinzelelo kwaye hayi ububanzi balo bonke. Ukusebenza kuhlala kunikezelwa kuxinzelelo lwe-60% nangona kunjalo uxinzelelo oluphezulu luvunyelwa ngamanye amaxesha ngexesha elifutshane xa kusenzeka iingozi.
Ukuphambuka ngaphezulu nangaphezulu kwama-75% ukuba kusetyenziswe ngaphezulu kweeyure kuya kunciphisa amandla amagwebu ukubuyisa ubume bayo bokuqala. Iya kuthi ke iqhubeke nokuqinisekisa ukhuseleko lwayo. Nceda uqaphele ukuba ukunyanzeliswa okuphezulu kukho umngcipheko wokonakalisa iinxalenye zentsimbi zangaphakathi zeDonut Fender.
I "Reaction Force" Curve ibonisa imikhosi evelise zombini kwizikhephe zeVessel nakwi-Steel Monopile ngexesha loxinzelelo lweDonut Fender.
Indawo yokungena / yokuphuma kwikona efenda
Yenzelwe ukukhusela ukungena kweHarbour njengeedokhi, izitshixo okanye njengesikhokelo kwiinqanawa eziphambukayo kwiindlela zazo eziqhelekileyo.
Uyilo lwe-Angled olubonisa ukuziva uthambile kwimeko yeempembelelo zangaphambili
Isikhokelo sobude bexesha elide lokulungisa iShip kwi-trajectory yaso ukuthintela umonakalo omkhulu kwimikhumbi kunye ne-jetty / Quay wall.
Ubungakanani kunye neeMilo zibalwa kuthathelwa ingqalelo iimpawu zeSitya ngelixa kuncitshiswa ububanzi befender ukuya kubuncinci.
Iindlela ezininzi zokulungisa ziyafumaneka: Umzekelo, iFender inokuncanyathiselwa kwipleyiti yentsimbi, ibotshwe kwi-jetty / Quai eludongeni; ezigcinwe ziingcingo okanye imixokelelwane kunye / okanye zibotshelelwe.
Isicelo seDonut Fender
Izitshixo kunye neminyango eyomileyo yedokodo, ukhuselo lwekona, ukujika ihlengethwa, iindawo ezinamaza amakhulu okanye ukhuselo lwebrorho
Olunye ulwakhiwo lwe monopile
Ijethi zangaphantsi kolwandle
Umbuzo Njani ngexesha lakho lokuhambisa?
A: Sinokunikezela ngesampulu yasimahla ukuba sinamalungu alungeleyo esitokhweni, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zekhuriya ngokubulela okukhulu ngokuqonda kwakho.
Egqithileyo Indlu yePhenyane lepontoon yokuThengisa ngokuShushu iDock Fender Ship Airbag
Okulandelayo: Ukuqina okuphezulu kweArch Type A Uhlobo V Uhlobo W Uhlobo M Uhlobo lweRubber Fender Strip
Iibhola zomoya zasemanzini, Inqanawa yomoya, China Irabha Fender, Iinqanawa zeTec, Ibhloko edibeneyo, Irabha yeFender,